xog baahiye - Page 3 of 8 - xog xaqiiqo ah
Fashil:Shiine culay oo sir culus iyo cod sir ah oo Ck laga duubay bannaanka keenay.
Subxanallah: masaajid ku yaala muqdisho oo dhacdo la yaab leh ka dhacday maanta iyadoo salada lagu jiro
Deg deg: cabdi ciise. Cajuun oo cafis waydistay safiyo tusmo kadib markii mucjiso la yaab leh la tusay
Naxdin: King ck oo arin lama filaan ah kulakacay shiine culey iyo xog sir ah
Deg deg:king ck oo arrin mucjiso ah ku sameeyay shiine culay, sir culusna sheegay.
Deg deg: shiine culey oo muqaal xun kaduubay Manaal beeldajiye iyo Ayub karlo
Deg deg: eglan show oo qaniisin weerar kusoo qaden afkana qeylo furatay iyado sheegtay arimo badan
Naxdin:Shiine culay oo arrin mucjiso ah ku sameeyay xaaskii hore ee Ck.
Subhanallah: why don’t planes fly over the kaaba?
Deg deg: nimcaan Hilaac oo hanjabaad kulul u diray muse biixi kana hadlay dilka wiilki boorame
Deg deg: Sheekh kenyawi oo baalasha ka rifay Sharma boy.
Deg deg: Nadiira Neyruus oo sheegtay arrin aad u naxdin badan.
Subxanallah: gabar somali ah oo arin layaab leh kukacday cameron herrin dartiis
Codeynta madaxweynaha dalka ee 2021.
5 calamadood oo ay leeyihin ragga ay dumarku ugu jecelyihiin
Deg deg: hodan Cabdi raxmaan oo rag cadaan ah weerar baskoolad kusoo qaaden iyo nafteda oo halis ku jirta
Deg deg: sheekh umal oo naciimo jookar garab siiyay iyo dahir alasow oo maxkamad la saarayo